Do Network Engineers Need Academic Diploma/Degree? - BIM Trainings
Dec 25, 2015 | Posted by	admin | Uncategorized	|
အခုတလော ကျနော့ကို လာမေးကျတဲ့ မေးခွန်း တစ်ခုက “Professional Network Engineer တစ်ရောက်ဖြစ်ဖို့ Diploma / Degree စတဲ့ Academic Certificate တွေ ရှိဖို့လိုလား” ဆိုတာပါပဲ။ တစ်ချို့ကလည်းပြောကြတယ် “Degree တွေ Certificate တွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ တကယ်တတ်ရင် တကယ်တော်ရင် ဘာမှကြောက်စရာ မလိုဘူး ၊ ကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်” ဆိုပြီးတော့။ ဒါလဲမှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Network Engineer တွေဆိုတာ တစ်ခြား IT Professional တွေဖြစ်တဲ့ Software သမား တွေနဲ့မတူပါဘူး. Bill Gate တို့ Mark Zuckerberg တို့ လည်း ဘွဲ့မရပဲ အောင်မြင်နေတာပဲ ဆိုပြီး နှိုင်းလို့မရပါဘူး။ Software သမား တစ်ရောက်ဟာ တကယ်တော်ပြီး ကြိုးစားရင် ကိုယ်ပိုင် App / Web site / Software Platform စတဲ့ Product တွေကို ဖန်တီးပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် စီးပွါးရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Network Engineer အလုပ်က တခြား IT Professional တွေနဲ့မတူပါဘူး။ Network Engineer တွေဆိုတာ အမှန်တော့ IT Service Sector ကသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Customer တွေ User တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ရှိပြီးသား Router ၊ Switch ၊ Firewall စတဲ့ Product တွေကို သုံးပြီးတော့ ဖြေရှင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့်ပြောရရင် Network Engineer အားလုံးနီးပါး ဟာ Company တစ်ခုခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ် ရတဲ့သူတွေချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ Professional Network Engineer တစ်ရောက်ဖြစ်ဖို့ အရေးအကြီးဆုံးက အလုပ်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြဿနာက အလုပ်ရှာတဲ့အချိန် ကိုယ်ကအဆက်အသွယ် မကောင်းရင်၊ ကိုယ့်ကိုသိတဲ့လူမရှိရင် Agency တွေ HR တွေကို ကျော်ဖို့တောင်မလွယ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Company တစ်ခုက Vacancy တစ်ခု ကြော်ငြာလိုက်ပြီဆိုရင် လာလျှောတ်တဲ့သူ ရာဂဏန်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို တစ်ခုချင်း စီစစ်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ Agency တွေ HR တွေက သတ်မှတ်ရလွယ်ကူတဲ့ စံနှုန်းတွေ သုံးလာပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အလုပ်အတွေ့အကြုံ အပြင် ၊ ပညာရေး လိုအပ်ချက် တွေလဲပါပါတယ်။ ပညာရေး လိုအပ်ချက် Diploma/Degree မရှိရင် ကိုယ်က အများနဲ့လျှင်တဲ့အချိန်ကြ အားနည်းတာပေါ့။ ပြီးတော့ Company အများစုရဲ့ HR စည်းကမ်းချက်တွေမှာ Professional Level Position အများစုကို ပညာရေး လိုအပ်ချက် မပြည့်မှီပဲ ပေးလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာ Company တစ်ခုလုံအတွက် စည်းကမ်းချက်ဖြစ်တာကြောင့် IT သမားတွေအတွက် ဆိုပြီးလည်း ခြွင်းချက် ပေးလို့မရပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ရသွားသည့် တိုင်အောင် ၊ Company အများစုရဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကြောင့် အမြင့်ကို တက်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ Singapore လိုနိုင်ငံ မှာဆိုရင်တော့ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က Diploma / Degree မရှိရင် အလုပ်လုပ်ခွင့် တောင်ချမပေးပါဘူး။
ကိုယ့်အရှေ့မှာ ရသွားကြတာပဲလို့ပြော တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်ဟာ အရင် ၂ နှစ် ၃ နှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ပြောင်းလဲ ခါစအချိန် ၊ Company အတော်များများက သူတို့ရဲ့ IT Infrastructure တွေကို စပြီး ရင်းနှီး တည်ဆောက်ခါစ အချိန်နဲ့မတူတော့ပါဘူး။ အဲဒီတုံးက Network Infrastructure တွေကဆောက်နေပြီ အဲဒီ Network ကို Manage လုပ်မဲ့ Engineer တွေကရှာလို့မရသေးဘူး။ Job Market ထဲမှာ CCNA အောင်ထားတဲ့သူ တော်တော်နည်းပါသေးတယ်။ CCNP ဆို ပိုတောင်နည်းသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ အလုပ်ပြီးဖို့ အရေးကြီးတာကြောင့် အခြေခံ ရှိသူတွေကို ရအောင် အလုပ်ခံ့ပြီးမှ ဖြေးဖြေးချင်း Train လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ Market ကမတူတော့ပါဘူး ၊ Employer Market ဖြစ်နေပြီ ။ Network Engineer အလုပ်ရှာနေသူတွေ အရမ်းကို များနေပါပြီ ၊ အများစုကလည်း CCNA ဒါမှမဟုတ် CCNP အထိတောင်ပြီးထားကျပါသေးတယ်။ Network Engineer နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေ အမြောက်အများ ပေါ်လာတာကြောင့်လဲ ပါပါတယ်။ Diploma/Degree မရှိပဲ IT အလုပ်အတွေ့အကြုံ ရှိထားရင်တော့ အခြေအနေကောင်းပေမဲ့ အခုမှစမဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒီ Post ကိုဖတ်နေတဲ့သူတွေ ထဲမှာတောင် CCNA ပြီးပြီး အလုပ် ရှာနေတာ မရသေးတဲ့သူ တော်တော် များပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကြ Network Engineer ဖြစ်ချင်တာကို Academic မှာက မဆိုင်တဲ့ Programming တွေ Database တွေ Web Development တွေ IT Management တွေသင်တယ် ဆိုပြီး Complain တက်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒါတွေ အားလုံးဟာ Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Skill-set တွေဖြစ်ပါတယ်။ Senior Network တစ်ရောတ်က App ၊ Database တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ၊ Protocol တွေ ဖြစ်တဲ့ TCP/UDP တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ HTTP / Cryptography တွေ ရဲ့အလုပ်လုပ် ပုံတွေကို သိမှာသာ Layer7 Device (NGFW, Load Balancer) တွေပါတဲ့ Network တွေကို နိုင်နိုင် နင်းနင်း ကိုင်တွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်လာမဲ့ SDN အတွက်ဆို အဲဒီ Theory တွေနဲ့ ပိုတောင်ရင်းနှီးဖို့ လိုပါအုံးမယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ “Professional တစ်ယောက်ရဲ့ Responsibility ဟာ ရယူထားတဲ့ အခကြေးငွေ နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်”။ ဒါကို Academic Degree အများစုမှာ IT Ethics Module တစ်ခုနဲ့ သင်လေ့ရှိပါတယ်။ လူ တွေက သူတို့မှာမရှိတဲ့ Technical Knowledge နှင့် Experience တွေ လမ်းညွန်မှု တွေ ကို Professional တွေဆီကနေ ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ Network Professional တစ်ရောက်အနေနဲ့ လူတွေရဲ့ Technical အားနည်းချက် နဲ့ Insecurity ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်သက်သာဖို့ ၊ ကိုယ်ကောင်းစားဖို့အတွက် လျှော့ပေါ့တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးတာတို့ ၊ တကယ် အကျိုးထိရောက်မဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို မပေးတာတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျစေလိုပါတယ်။
အပေါ်က အကြောင်းအရာတွေ အားလုံးဟာ ကျနော့အမြင် သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
အခုတလော ကနြော့ကို လာမေးကတြဲ့ မေးခှနျး တဈခုက “Professional Network Engineer တဈရောကျဖွဈဖို့ Diploma / Degree စတဲ့ Academic Certificate တှေ ရှိဖို့လိုလား” ဆိုတာပါပဲ။ တဈခြို့ကလညျးပွောကွတယျ “Degree တှေ Certificate တှကေ အရေးမကွီးပါဘူး။ တကယျတတျရငျ တကယျတျောရငျ ဘာမှကွောကျစရာ မလိုဘူး ၊ ကွိုးစားရငျအောငျမွငျနိုငျပါတယျ” ဆိုပွီးတော့။ ဒါလဲမှနျသငျ့သလောကျ မှနျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ Network Engineer တှဆေိုတာ တဈခွား IT Professional တှဖွေဈတဲ့ Software သမား တှနေဲ့မတူပါဘူး. Bill Gate တို့ Mark Zuckerberg တို့ လညျး ဘှဲ့မရပဲ အောငျမွငျနတောပဲ ဆိုပွီး နှိုငျးလို့မရပါဘူး။ Software သမား တဈရောကျဟာ တကယျတျောပွီး ကွိုးစားရငျ ကိုယျပိုငျ App / Web site / Software Platform စတဲ့ Product တှကေို ဖနျတီးပွီး အောငျအောငျမွငျမွငျ စီးပှါးရှာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Network Engineer အလုပျက တခွား IT Professional တှနေဲ့မတူပါဘူး။ Network Engineer တှဆေိုတာ အမှနျတော့ IT Service Sector ကသူတှဖွေဈပါတယျ။ Customer တှေ User တှရေဲ့ လိုအပျခကျြကို ရှိပွီးသား Router ၊ Switch ၊ Firewall စတဲ့ Product တှကေို သုံးပွီးတော့ ဖွရှေငျးပေးရတာဖွဈပါတယျ။ တဈနညျး အားဖွငျ့ပွောရရငျ Network Engineer အားလုံးနီးပါး ဟာ Company တဈခုခုမှာ အလုပျဝငျလုပျ ရတဲ့သူတှခေညျြးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီတော့ Professional Network Engineer တဈရောကျဖွဈဖို့ အရေးအကွီးဆုံးက အလုပျရဖို့ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီမှာ ပွဿနာက အလုပျရှာတဲ့အခြိနျ ကိုယျကအဆကျအသှယျ မကောငျးရငျ၊ ကိုယျ့ကိုသိတဲ့လူမရှိရငျ Agency တှေ HR တှကေို ကြျောဖို့တောငျမလှယျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Company တဈခုက Vacancy တဈခု ကွျောငွာလိုကျပွီဆိုရငျ လာလြှောတျတဲ့သူ ရာဂဏနျး ရှိတတျပါတယျ။ အဲဒါတှကေို တဈခုခငျြး စီစဈဖို့ မတတျနိုငျတော့ Agency တှေ HR တှကေ သတျမှတျရလှယျကူတဲ့ စံနှုနျးတှေ သုံးလာပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ အလုပျအတှအေ့ကွုံ အပွငျ ၊ ပညာရေး လိုအပျခကျြ တှလေဲပါပါတယျ။ ပညာရေး လိုအပျခကျြ Diploma/Degree မရှိရငျ ကိုယျက အမြားနဲ့လြှငျတဲ့အခြိနျကွ အားနညျးတာပေါ့။ ပွီးတော့ Company အမြားစုရဲ့ HR စညျးကမျးခကျြတှမှော Professional Level Position အမြားစုကို ပညာရေး လိုအပျခကျြ မပွညျ့မှီပဲ ပေးလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာ Company တဈခုလုံအတှကျ စညျးကမျးခကျြဖွဈတာကွောငျ့ IT သမားတှအေတှကျ ဆိုပွီးလညျး ခွှငျးခကျြ ပေးလို့မရပါဘူး။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အလုပျရသှားသညျ့ တိုငျအောငျ ၊ Company အမြားစုရဲ့ စညျးကမျးခကျြတှကွေောငျ့ အမွငျ့ကို တကျဖို့ ခကျပါတယျ။ Singapore လိုနိုငျငံ မှာဆိုရငျတော့ အစိုးရ ကိုယျတိုငျက Diploma / Degree မရှိရငျ အလုပျလုပျခှငျ့ တောငျခမြပေးပါဘူး။
ကိုယျ့အရှမှေ့ာ ရသှားကွတာပဲလို့ပွော တဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုအခြိနျဟာ အရငျ ၂ နှဈ ၃ နှဈ မွနျမာနိုငျငံ ပွောငျးလဲ ခါစအခြိနျ ၊ Company အတျောမြားမြားက သူတို့ရဲ့ IT Infrastructure တှကေို စပွီး ရငျးနှီး တညျဆောကျခါစ အခြိနျနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ အဲဒီတုံးက Network Infrastructure တှကေဆောကျနပွေီ အဲဒီ Network ကို Manage လုပျမဲ့ Engineer တှကေရှာလို့မရသေးဘူး။ Job Market ထဲမှာ CCNA အောငျထားတဲ့သူ တျောတျောနညျးပါသေးတယျ။ CCNP ဆို ပိုတောငျနညျးသေးတယျ။ အဲဒီတုနျးကတော့ အလုပျပွီးဖို့ အရေးကွီးတာကွောငျ့ အခွခေံ ရှိသူတှကေို ရအောငျ အလုပျခံ့ပွီးမှ ဖွေးဖွေးခငျြး Train လုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုအခြိနျမှာတော့ Market ကမတူတော့ပါဘူး ၊ Employer Market ဖွဈနပွေီ ။ Network Engineer အလုပျရှာနသေူတှေ အရမျးကို မြားနပေါပွီ ၊ အမြားစုကလညျး CCNA ဒါမှမဟုတျ CCNP အထိတောငျပွီးထားကပြါသေးတယျ။ Network Engineer နဲ့ ပတျသကျတဲ့ သငျတနျးတှေ အမွောကျအမြား ပျေါလာတာကွောငျ့လဲ ပါပါတယျ။ Diploma/Degree မရှိပဲ IT အလုပျအတှအေ့ကွုံ ရှိထားရငျတော့ အခွအေနကေောငျးပမေဲ့ အခုမှစမဲ့သူတှေ အတှကျကတော့ မလှယျပါဘူး။ ဒီ Post ကိုဖတျနတေဲ့သူတှေ ထဲမှာတောငျ CCNA ပွီးပွီး အလုပျ ရှာနတော မရသေးတဲ့သူ တျောတျော မြားပါလိမျ့မယျ။
တခြို့ကွ Network Engineer ဖွဈခငျြတာကို Academic မှာက မဆိုငျတဲ့ Programming တှေ Database တှေ Web Development တှေ IT Management တှသေငျတယျ ဆိုပွီး Complain တကျတတျပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ဒါတှေ အားလုံးဟာ Professional တဈယောကျဖွဈဖို့ လိုအပျတဲ့ Skill-set တှဖွေဈပါတယျ။ Senior Network တဈရောတျက App ၊ Database တှရေဲ့ အလုပျလုပျပုံ ၊ Protocol တှေ ဖွဈတဲ့ TCP/UDP တှရေဲ့အလုပျလုပျပုံ HTTP / Cryptography တှေ ရဲ့အလုပျလုပျ ပုံတှကေို သိမှာသာ Layer7 Device (NGFW, Load Balancer) တှပေါတဲ့ Network တှကေို နိုငျနိုငျ နငျးနငျး ကိုငျတှယျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အခုနောကျလာမဲ့ SDN အတှကျဆို အဲဒီ Theory တှနေဲ့ ပိုတောငျရငျးနှီးဖို့ လိုပါအုံးမယျ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ ပွောခငျြတာကတော့ “Professional တဈယောကျရဲ့ Responsibility ဟာ ရယူထားတဲ့ အခကွေးငှေ နဲ့ထိုကျတနျတဲ့ အကောငျးဆုံး ဝနျဆောငျမှုကို ပေးဖို့ပဲဖွဈပါတယျ”။ ဒါကို Academic Degree အမြားစုမှာ IT Ethics Module တဈခုနဲ့ သငျလရှေိ့ပါတယျ။ လူ တှကေ သူတို့မှာမရှိတဲ့ Technical Knowledge နှငျ့ Experience တှေ လမျးညှနျမှု တှေ ကို Professional တှဆေီကနေ ရဖို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။ အဲဒီတော့ Network Professional တဈရောကျအနနေဲ့ လူတှရေဲ့ Technical အားနညျးခကျြ နဲ့ Insecurity ကို ခုတုံးလုပျပွီး ကိုယျသကျသာဖို့ ၊ ကိုယျကောငျးစားဖို့အတှကျ လြှော့ပေါ့တဲ့ ဝနျဆောငျမှု ပေးတာတို့ ၊ တကယျ အကြိုးထိရောကျမဲ့ လမျးညှနျမှုကို မပေးတာတို့ကို တတျနိုငျသမြှ ရှောငျကစြလေိုပါတယျ။
အပျေါက အကွောငျးအရာတှေ အားလုံးဟာ ကနြော့အမွငျ သကျသကျသာဖွဈပါတယျ။ စာဖတျသူရော ဘယျလိုမွငျလဲ ??